Kedu igwe ndị anyịnya igwe na-agba? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Cycgba ịnyịnya ígwè Pro - esi eme ihe
Cycgba ịnyịnya ígwè Pro - esi eme ihe
Kedu igwe ndị anyịnya igwe na-agba?
Ndị otu WorldTouranyịnya igwe2021
AG2R La Mondiale.Igwe kwụ otu ebe: BMC. Otu: Campagnolo.
Cofidis.Igwe kwụ otu ebe: Site na Rosa. Otu: Campagnolo.
Deceuninck-QuickStep.Igwe kwụ otu ebe: Pụrụ iche.
EF Mmụta-Nippo.Igwe kwụ otu ebe: Kannondale.
Otuama-FDJ.Igwe kwụ otu ebe: Nkume.
Ineos Grenadiers.Igwe kwụ otu ebe: Pinarello.
Mba Israel nke bidoro.Igwe kwụ otu ebe: Ihe kpatara ya.
Lotto-Soudal.Igwe kwụ otu ebe: Ridley.
Ajụjụ anyị jụrụ uru n'ụtụtụ a bụ ole igwe kwụ otu ebe ha nwere? (Uptempo music) Ugbolo ole ka inwere ma nwekwaa n'ulo? - Ole ka m nwere n’otu? nwee n'ụlọ, yabụ enwere m, otu, m ga - ekwu n'etiti igwe kwụ otu isii na asatọ gburugburu ụwa.- Ego ole ị nwere ka ị nwere n'ụlọ? (chịrị ọchị) - Ọtụtụ. Eleghị anya na 10 ma ọ bụ 11. - Ọtụtụ dị ka nwunye m na-ewekarị m iwe.
Ekwesịrị m ịmegharị igwe kwụ otu ebe site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ, mana ee, enwere m ụdị igwe kwụ otu ebe site n'oge ọ bụla m bụ pro na ee, ee, ọ ga-abụ ọtụtụ ugbu a - wow, nke ahụ ga-abụrịrị ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, mana Banyere igwe kwụ otu ebe ugwu ugwu ma ọ bụ igwe gravel ma ọ bụ igwe kwụ otu ebe, ị nwere ọtụtụ n'ime ha? - Ee, enwere m igwe kwụ otu ebe, igwe kwụ otu ebe, na-agba ọsọ igwe kwụ otu ebe, yabụ ee, adị m njikere maka ihe ọ bụla - Ee, na ọ dị ka karịa ịnyagharị igwe kwụ otu ebe site n'akụkụ ruo n'akụkụ. Nke ahụ dị ka ịchọrọ ụlọ nkwakọba ihe. - (ochi) Ee, achọrọ m nnukwu okpuru ulo, nke ahụ bụ n'ezie. - Ego ole anyị nwere ka ị nwere? - Oh Nwoke.
hiit ịnyịnya ígwè
N bụ igwe kwụ otu ebe ị maara, yabụ na ịnweghị ike ịnwe igwe kwụ otu ebe - (niile) Enwere m nnukwu ihe site na HTC, enwere m Scott si HTC, enwere m igwe kwụ otu ebe Canyon site na 2011, Omega Pharma-Lotto, enwere m Ridleys abụọ, m nwere Pally, nke ejiri aka mee otu okpokolo agba sitere na America. Enwere m Vespa. (Oge okpomọkụ) Ọ bụrụ na nke ahụ gụnyere igwe kwụ otu ebe.
Enwekwara m moto-ngwu (Summer) na igwe mara abuba. My mbụ mnya igwe, a GT, a classic Mmaji Triangle ma ọ bụrụ na ị na-echeta. Eeh.
Ee - modeldị dị a thataa ka nke ahụ bụ? - Ọ bụ, nke ọma, nke ahụ bụ, oh, ị chere. Echere m na ọ bụ GT01. O meela ochie, ọ dịka n’afọ 2000.
Nke 1999.- Ọfọn, enweghị m ọtụtụ igwe kwụ otu ebe, mana enwere m ole na ole.
Know mara, otu na-ahapụ anyị ka anyị na-a otutu anyịnya igwe. Ma ee, enwere m ụfọdụ. Anyị ka nwere ebe na steeti ndị dị na Asheville, North Carolina.
Echere m na n’etiti mụ na nwunye m anyị nwere ike ịnyịnya igwe 10 ma ọ bụ 12 ebe ahụ, yana elekere itoolu ọzọ na Girona - Ndị otu egwuregwu anyị niile ka ị nwere igwe kwụ otu ebe? - Enwere m ụdị ụdị dị iche iche, dịka igwe kwụ otu ebe, E-anyịnya igwe, igwe ekwo ekwo, ee. Otu ụyọkọ ọgba tum tum dị iche iche, igwe kwụ otu ebe, yabụ ee, abụrụ m onye nchịkọta - you nwere igwe kwụ otu ebe? - Ee, anaghị m, mana enwere m nke nwere ike ịbụ igwe kwụ otu ebe. Enwere m nke ochie m, nke mbụ m na-agba ịnyịnya ígwè, BT.- Oh, dị jụụ.- Na nke ahụ nwere ike imerụ ntakịrị ahụ ugbu a, mana ole igwe kwụ otu ebe ị nwere? Ha! Achọghị m ịgwa gị igwe kwụ otu ebe ole m nwere n’ụlọ, maka na ha dị ole na ole, mana ihe kachasị mkpa bụ wheel aero.
Had ga-azụrịrị igwe ịnyịnya igwe gị n'ihi na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-enweta igwe kwụ otu ebe na njedebe nke afọ anaghị enweta ya, nri? You nweta ya? - Mba Enwetara m ya - Nwa nwoke obi uto - Ee. Atọ ndị a.
Otu dị na ebe ngosi ihe mgbe ochie Malvern. Na nke ọzọ bụ n'ụlọ m. - Ọ bụ otu n’ime mmechuihu kasịnụ mgbe m gbanwere Ọkachamara Findchọta enweghị m ike idebe igwe kwụ otu ebe na ngwụcha afọ, agbanyeghị na azụrụ m ole na ole.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ugbu a siri dị iche na ole ha debere na ndị ole ha anaghị ede. Adam Yates nwere naanị igwe kwụ otu atọ na aha ya. Nri, ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a biko nye anyị mkpịsị aka aka n'okpuru.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ihe ndị a na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ime ma ọ bụrụ na ha abụghị ndị ọkachamara ịgba ígwè, pịa ebe a n'okpuru pịa.
Ego ole ka onye na-agba ịnyịnya ígwè ọkachamara na-efu?
Andres L. Douzoglou, onye ndụmọdụ nke na-arụ ọrụna ịgba ígwèụlọ ọrụ na naọkachamaraihe egwuregwu na-ekwu, KasịmakaNdị na-agba ịnyịnya na njemdịnọkwa aigwe kwụ otu ebenke ahụ bụ $ 10,000 na elu ahịa ọnụahịa.27. 2013.
Kedu ndị otu ịgba ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya ibu?
Ndị otu&Ndị na-agba ịnyịnya
NnukwuOfflọ Ọrụ GbanyụọOtu. GlobalOtu.
XC Marathon. GlobalOtu.
Nwa ojii. GlobalOtu.
Nnochite anya Obodo. GlobalOtu.
Site na ọrụ agba ọmalịcha ọla edo ya, igwe kwụ otu ebe a agaghị enwe mgbagwoju anya na nke onye na-achị ọla edo ọla edo Greg Van Avermaet na-achị. Nke a abụghị nnukwu TCR Advanced SL ya, yabụ pịa akara ngosi mgbịrịgba ka oge ọ bụla anyị bulite otu isiokwu ị ga - enweta ọkwa dịka ọ na - enyere ọwa aka ma melite ọdịnaya anyị. (percussive music) Van Avermaet si bike nwere ụfọdụ n'ezie jụụ ọhụrụ mmiri m na-ahụbeghị ruo ugbu a, ma tupu m ga-esi n'ime nkọwa anyị kwesịrị ikwu banyere nnọọ pụtara agba ọrụ.
Ihe a gwara m Van Avermaet nwere mmetụta na onwe ya nke mere o doro m anya na ekele m nwetara impeccable uto na ọla edo na-egbuke egbuke nke dị ịtụnanya, enwere ụfọdụ nkọwa mara mma na eserese yabụ enwere nnukwu mmeri mgbe ọ bụla na ala tube ruo ugbu a, yabụ anyị nwere obere map nke Brazil maka mmeri Olimpik na Rio Trident nke pụtara mmeri ya na Tirreno-Adriatico ma bụrụkwa okwute o meriri na Paris-Roubaix. Ma mgbe ahụ, mgbe anyị na-agagharị n'azụ igwe kwụ otu ebe, ọla edo ahụ na-ada na nwa ahụ. Ma ọ dị mfe, mana ọmarịcha mma, ọ dị mma.
na-eme ihu aka na dumbbells
Na azụ ebe a, anyị nwekwara akara ngosi GBA n'azụ azụ dị n'elu akwa breeki. TCR nwere nhazi oche oche agbakwunyere nke ị na-ahụghị n'ọtụtụ igwe kwụ otu ebe n'oge a, ọ pụtara na mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe, ị ga-egbutu ya ogologo, mgbe ahụ ihe mgbochi ahụ nke na-ejide okporo ígwè ahụ na-arịgo elu. na e nwere a bit nke ukpụhọde n'ebe ma ọ bụrụ na ị chọrọ tweak elu nke sadulu. Ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe onye nrite ọla edo nke Olympic na-anọdụ na, ọ dị ka ọfụma CADEX Boost nke ọhụụ bụ, nke ọma, ọ bụ imi imi ewepụ.
Ndị a na-ewu ewu ugbu a, ụfọdụ ụdị ewepụtala ha ugbu a ka ha dị mkpụmkpụ karịa ka ọdụdụ ogologo nke ọdịnala dị ogologo, nke pụtara na ị nwere ike belata nrụgide ụfọdụ na perineum ebe onye na-agba ịnyịnya ahụ na-anọdụ, mana nwayọ m na-akwado ọkpụkpụ ịnọdụ ala ebe a ma na-eche nnọọ na ọ na-adị mma na ọ fọrọ nke nta padded na spongy. Nwere ike ịchọpụtala na breeki bụ breeki breeki, na-adọrọ mmasị, Van Avermaet ka na-ahọrọ breeki rim karịa diski brek. O yiri ka nkewa dị mma na peloton n'oge dị n'etiti rim na diski.
Ọzọ anyị kwesịrị ikwu maka wiilị nke Greg. Ihe ndị a bụ akara ọhụụ tubed nke ọhụrụ CADEX 65. Nweta ihe ohuru nke sitere na ihe ohuru ohuru CADEX.
Nke a bụ oge mbụ m jisiri ike itinye aka na carbon. Dị ka m kwuru, ndị a bụ taya taya, ma enwere ụdị nke tubeless ma ọ bụrụ na ịchọrọ taya taya na-enweghị tube, agbanyeghị uru ndị ahụ ka na-ahọrọ ọnụ ọnụ carbon. Na mbụ ahụrụ m Michi Schär si otu CCC na bọs otu ya.
Ọ na-ekwu na obi dị ya ụtọ na ike nke igwe kwụ otu ebe a. Anyị na-atụkọta taya taya nke Vittoria CORSA G na wiilị ahụ, nke ahụ bụ millimita 26, ejiri m obi ike tụọ ya na vernier. Ha na-apụta n'obosara nke kpọmkwem millimita 26.
Mana aga m eme nnụnụ ụda freewheel maka na ahụtụbeghị wiil ndị a, achọrọ m ịma ihe hubs freewheel na-ada ka ọ dịkwa m n'aka na ị ga-emekwa. (Wheel na-eme mkpọtụ na-ada ụda) Ooh, ọ bụ oke ụda. Na-ada ụda nke ọma, na-ada ụda. (ọchị) Tupu ị jụọ, m ga-emekwa GVA sadulu ya.
Ifufe febuburu wiilị ahụ. (ọchị) 66 sentimita na ọkara, na etiti ahụ, ọ bụrụ na ị na-eche, bụ ọkara Nkezi. Obere obere ihe m ga-anya.
Yabụ ihe m ga - eme bụkwa isite na etiti aka ya, n'ọnụ ya. Sentimita 62. Na o yiri ka ọ na-agba ọsọ, ọ bụ nnukwu azuokokoosisi, na otu 13 centimita azuokokoosisi na-agwakọta omume ọma n'ime kokpiiti uzo nke Greg si bike.
Ya mere, ọ na-eji igwe kwụ otu ebe SLR kọntaktị, igwefoto ejikọtara ọnụ na nke dị mma ma dị warara, ọ nwere njide maka kọmputa ya n'etiti, a na-enyefekwa eriri ndị ahụ nke ọma, wee jirizie mpempe akwụkwọ a dozie ya. otu ofdị ọkụ eletrik, nke dị ka nke ahụ, n'ụzọ ụfọdụ na-ejikọ eriri ndị ahụ niile, onye ọrụ ahụ mere ezigbo ọrụ. Ma mgbe ahụ, o nwekwara ihe ịgba ọsọ na-agba ọsọ na ya. Dị jụụ, ọ bụ n'ezie onye ọkwọ ụgbọ ala bara uru na sprint, yabụ ejiri m n'aka na ọ na-eji ya nke ọma mgbe ahụ ọ nwere Dura-Ace DI2 niile, ya mere n'ihu Dura-Ace levers, agbụ ahụ ejiri Dura-Ac Ike mita na ya, ọ bụ 53 39, ọ nwekwara cranks 172.5.
Dị nnọọ ka m, ma eleghị anya, e coomi. Na azụ ọ nwere cassette ya Dura-Ace, nke bụ 11 30. Ugbu a ọ dị m mkpa ịtụle igwe kwụ otu ebe a, mgbe m buliri ya wee buru ya ebe a ọ dị m ọkụ nke mere na enweghị m ike ichere ịhụ ole ọ dịrị.
Aga m ewepụta karama CCC, mana ekwesịrị m ịkọwa na nke a bụ agbụrụ zuru ezu na-ewu ka o wee nwee mita dị ike, ọ nwere ndị na-agba Dura Ace, enweghị isi ya na enweghị agbụrụ, nke obere ga-eme tinye ibu ibu. Mana echere m na nke a ga-adị mfe. Ya mere, tinye nzo gị ugbu a.
Ọ ga-abụ 6.8, karịa 6.8, ma ọ bụ n'okpuru 6.8? Ooh! (ọchị) Ọ dị mfe. 6.67, ọ bụ otu n’ime pro ịnyịnya ígwè kachasị dị mfe achọta.
Karịsịa na wiil 65 milimita ndị miri emi. Ọ bụrụ na ha etinye 42s n'ebe ahụ, ọ ga-adị mfe karị itinye ụfọdụ ibu na nke ahụ. (chị ọchị) Nke ahụ dị mma.
Echefuru m ikwupụta obosara aka aka Greg, naanị m mere ha ka ha jiri teepu tụọ ma ha dị sentimita iri na isii n'obosara. Olileanya na ị na-enwe mmasị a anya na igwe kwụ otu ebe Greg Van Avermaet dị ka m mere m ga-egosi gị. Ọ bụ ụdị igwe kwụ otu ebe m, nke a.
Olileanya na ị nwere ike ikwu na m nwere mmasị na ya. Ọrụ agba na ihe niile. Mana ahụrụ m ezigbo ọkụ ahụ n'anya, igwe kwụ otu ebe nwere ụdị atụmatụ ikuku, dịka wiilị miri emi na kokpiiti, ọ bụrụ na ọ masịrị gị wee biko nye ya mkpịsị aka aka, denye aha na GCN, kesaa ndị enyi gị ma hụ Lelee igwe kwụ otu ebe ọzọ ederede, wee pịa Van Avermaet's stem stem.
Kedu ihe ndị otu ịgba ịnyịnya ígwè na-eji igwe ochie ha?
Mgbe oleigwe kwụ otu ebe na-emena-ere, hadịrere ya zuru ezuigwe kwụ otu ebe, ma ọ bụn'imeụfọdụ na-enweghịihewiilị. Gịnwere ike't nnọọ ịzụtaihenaanị, ma e wezụga ma eleghị anyaiheWheels nke dị ọtụtụihenkeanyịnya igwe. Ha niile na-ere. Ọ dị obere naiheWorldwaNdị otu ngagharịnọkwasiha gara agaa kara akaanyịnya igwe.
Kedu ihe bụ domestique na ihe ha na-eme dodynasty bụ okwu French nke, mgbe e jiri ya mee ihe igwe gbara gburugburu, pụtara n'ụzọ nkịtị ịbụ ohu na ọrụ nke ezinụlọ, naanị ịbụ onye inyeaka nye onye ndu otu ya dabere na ike ha ahụmịhe ọkachamara na oke oke, yabụ nke a bụ onye ndu anyị na ọrụ ahụ na-atụ anya na-eme ka ihe niile dokwuo anya, ọ bụ ezie na otu n'ime ọrụ ndị bụ isi abanyela n'ụlọ iji kpuchido ndu ya site na ifufe nọ ọdụ n'azụ onye ọkwọ ụgbọ ala ọzọ, na-echekwa gị ihe dịka 30% ike na mbara ala n'okporo ụzọ behindnọdụ ala n'azụ ndị otu gị na-azọpụta gị karịa n'ụzọ dị otú a domestiques ga-eme ihe niile enwere ike iji hụ na onye isi otu gị na-echekwa ike dị ka o kwere mee maka ọkwa niile ma ọ bụ opekata mpe ruo mgbe ahọpụtara onye na-agba kachasị mma, enweghị mmejọ dịkwa oke ọnụ. mgbe ọ bụ maka ichekwa agbụrụ ahụ na mbido usoro, ndị ezinụlọ nke onye ndu ahụ na-ahụ na ọ dịghị onye dị egwu s na-aga n'okporo ụzọ na mbido ọpụpụ ma ọ bụrụ na otu a adịghị oke ka ọkwa ahụ na-aga n'ihu sses, domestiques ga-amalite idobe ijeụkwụ n’ihu iji hụ na ndị na-apụ apụọghị anya ma dabere na ebum n’uche ndị otu Quhapụ ọrụ ha gụnyekwara inyere onye ndu ha aka ma ọ bụrụ na ọ nwee nsogbu, ọ bụrụ na a manyere ya ịkwụsị n’ihi nke taya dara ada, nsogbu n'ibu, breeki eke ga - ada, mgbe ahụ, otu ma ọ bụ karịa nke ndị ezinụlọ ahụ ga - eche ya na onye ga - eduzi ya, ha ga - alaghachi na Weta obo nke ihe na - echekwa ike ha. Ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, otu ezinụlọ ga - ahụ ọ bụ na onye ndu ya agaghị akwụsị mgbe ọ na-enweghị mgbe onye ndu ya chọrọ ka nri rie ihe ọ extraụ extraụ ma ọ bụ ihe ọzọ ifufe na-ewetara ha ebe kwesịrị ekwesị Ọnọdụ tupu akụkụ dị mkpa nke agbụrụ ahụ, ọ bụrụ na cobblestone na-arịgo ma ọ bụ na mpaghara nwere ike na crosswinds mgbe onye ndu ga-eme ya You ga-etinye ike dị ukwuu iji banye n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị ma ọ nwere ike ọ gaghị adị gị mma ma ọ bụrụ na isi ihe dị mkpa na-amalite, ma ọ bụ ka njọ, ọbụghị ọtụtụ nke expe ndị nwe obodo na-aghọ mkpebi amamịghe na-ezukọ n'okporo ụzọ ọtụtụ agbụrụ ụbọchị ndị a anaghị ekwe ka redio gbaa, n'ihi ya, ịdị mma a dị mkpa karị. Onye ndu otu ahụ na-abụkarị onye ọkwọ ụgbọ mmiri kacha sie ike na otu ahụ mana ọ bụghị ikpe, hụ na ị ga-eme ka ha jiri akọ na-amata ihe ọma domestique nwere ike ime ka ha dị jụụ ma gbochie ha ime nke ahụ Imehie Ihe Na-agba Ọsọ A ọrụ onye na-agba ọsọ na obere ọrụ. dị iche na ịbụ onye ndu GC ma dabere na ọrụ ị na-arụ n'ime ndị na-agba ọsọ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ole na ole BB gbaa mbọ hụ na ọsọ ọsọ ọsọ adịghị oke oke wee dezie ije ije n'isi nke otu ahụ iji jide n'aka n ọdịiche anaghị adị oke wee malite imechi oghere ahụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ dabara na ọrụ nke ibute otu ezigbo ndị na-agba ọsọ ga-anwa idebe ọtụtụ domestiques dị ka o kwere mee tupu akụkụ ikpeazụ nke ọsọ ahụ, ozugbo ndị otu ahụ ruru kilomita ikpeazụ , nke ọ bụla domestique nwere ọrụ nke ha, na-amalitekarị na freecase na-arịgo ihe mgbaru ọsọ ha bụ iji mee ka ọsọ ọsọ dị elu dị ka o kwere mee iji mee ka onye na-agba ha pụọ ​​na nsogbu ma belata ihe ize ndụ nke igbochi na ọsọ ahụ na-eji nwayọọ nwayọọ na-etolite ruo nke ikpeazụ ọrụ dị n'ụlọ bụ iji ruo n'ihu na mita 400 iji jiri nwayọ mụbaa ọsọ ahụ gburugburu 200 mita site na njedebe nke onye na-agba ọsọ ga-atụ anya ịrụ ọrụ ya. Oru ufodi nke ulo uka bu iwepu oge ezumike site na ebumnuche nke inyere onye ndu ha aka ma agba oso n’elu ugwu nke na adighi ada ada mgbe rọketi oso na-egosi mgbe ha no na mbu iji rituo na ulo. r ije ije na ha nwere ike ịnọ n'ọnọdụ dị mma onye ndu na-awakpo site na otu dị n'azụ ya, ha nwere ike tinye ha ruo ogologo oge o kwere mee, mana ebumnuche nke ịkachasị oge iji ruo ndị isi asọmpi ha ga-achụkwa akụrụngwa ha, mgbe ọnọdụ bilitere. , nke bu ihe di nkpa na agba oso, ugbo ala ndi otu adighi agha n’azu ndi agha, ya mere na oburu na onye ndu nwere taya dara ada, ihe damask nyere ya wheel ya iji mee ka mgbanwe a di ngwa, iji kpalie ma obu kpalie ha njikwa ndị egwuregwu anyị na-amalite ịjụ ikike nke onwe ha n'oge dị oke egwu na oge ntụgharị abụghị mmekọrịta dị iche iche nke ndị otu egwuregwu na-emekọ ọnụ nwere ike ịpụta na mystique bụ isi ihe iji jide n'aka na onye njikwa ha anaghị enye elu ma ọ bụ n'oge dị oke mkpa mechara jide okwu ahụ bụ super domestique na-ezo aka onye na-agba ịnyịnya nke aka ya otu n'ime ndị kachasị mma n'ụwa ọ nwere ike imeri agbụrụ n'onwe ya, onye na-etinye onwe ya mgbe ụfọdụ na ọrụ ndị ọzọ na-eche fabian Cancellara na ụwa Chris Froome 2013 na Tour de France 2012Tony Martin ọkwọ ụgbọ ala maka Mark Cavendish Oryens Volt ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agbụrụ abụọ ọ bụla nke oge bụ isi nsogbu na isi mmiri ozuzo bụ ọkwa dị ala nke ị ga-eburu n'uche nke a
Eme Uru na-eji obere igwe kwụ otu ebe?
N'oge nke oge a,Urumgbejirikaobere etitina onye na-agba egwuregwu ntụrụndụ yiri nke ahụ n'ihi na ha chọrọ ịnya nnukwu dobe na njikwa ahụ. Dika akpa tubes na-eto eto maka otu enyereetitinha,Uruna-amanye jidesieobere osisiiji jigide ọnọdụ ha.10.02.2020
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eji igwe kwụ otu ebe?
Ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ijiiheatụgharị igwe kwụ otu ebemaka ihe ọ bụla site na ịkụda ụkwụ na ọzụzụ dị ukwuu.Urubụkwaruphujirikaatụgharị igwe kwụ otu ebemgbe ufodu mgbe obughi ihe bara uru iji weta nke haigwe kwụ otu ebe, dịka ọmụmaatụ ma ọ bụrụ na ha gaa mgbatị ahụ ma ọ bụ ebe ọzụzụ.
1. 24K Gold Oke UgwuIgwe kwụ otu ebe$ 1 nde. Ezubere ma malite Hugh Power, nke a bụmostgba igwe kachasị ọnụn'ahịa na-efu otu nde dollar!
Onye ga-agba ịnyịnya igwe Bianchi na 2021?
Na nke mbụ n'ime mgbanwe atọ ahụ,Bianchiahọrọla imecha afọ asaa ha na ndị otu Jumbo-Visma nagasonye na Mitchelton. Ndi otu nwoke Jumbo-Visma ndi nwoke na ndi umu nwanyiga-agba ịnyịnyaLo. Loanyịnya igwe na 2021.19.10.2020
Kedu igwe ọgbụgba CCC na-eji?
TCR bụ igwe na-akọ akụkọ ifo nke nwere ihe karịrị afọ iri abụọ nke ihe nketa njem nlegharị anya, gụnyere ịnwe mmeri na Giro D'Italia site n'aka Tom Domoulin na 2017, ọ bụkwa isiigwe kwụ otu ebeịhọrọ maka ọtụtụ ndị otu na ọtụtụ nkebi.10.07.2019
Kedu pedals na-eji uru?
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-agba ịnyịnya nọ namakaplatoonjirima Shimano ma obu Leepedaln'ihi na ụdị abụọ ahụ na-akwado ọtụtụ ndị otu WorldTour. Na mgbakwunye, ụfọdụ ndị egwuregwu nwere mmasị ịnwe ndị na-agba ha n'otu ụzọpedalnke mere na domestique nwere ike inye onye ndu otu igwe kwụ otu ebe ya na ọnọdụ mberede ngwa ngwa.iri abụọ 2017.
Kedụ ka m ga - esi nweta ọrụ igwe kwụ otu ebe?
Disassemble na ihe mgbaze ọcha yinye, dị ọcha-elu n'ihu & nkwupụta ụda; azụ derailleurs, cranks, ọrụ, ukpụhọde, Isi ọrụ, freehub ọrụ na ziri ezi torque Ziga igwe kwụ otu ebe ebe a maka ịrụ ọrụ, hụrụ ya n'anya na-ekele Darren na Sarah maka ịbụ ndị enyi na enyi!
Ọ nwere igwe kwụ otu ebe na uru ndị a na-agba?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ igwe kwụ otu ebe nke uru ndị a na-agbaso bụ eziokwu na nkọwa nke ndị na-akwado ha, anyị na-ahụkarị ihe ndị na-apụ apụ nke ndị na-agba ịnyịnya na-ahọrọ. O doro anya na ndị ọrụ kachasị mma na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe a, atụmatụ anyị nke Pro Bike na-ekpughe ụfọdụ aghụghọ nke azụmaahịa eji eme ihe iji hụ na igwe ọ bụla dị nkọ na ịrụ ọrụ nke ọma.